5 Talaabo oo loogu guuleysto Suuq Xisaab-Ku-saleysan | Martech Zone
Wednesday, April 5, 2017 Talaado, Agoosto 1, 2017 Rishi Dave
Suuq geyn xisaabeed (ABM) ayaa kasbadaysa suuqleyda B2B. Sida laga soo xigtay daraasad dhowaan, 2017 B2B Muuqaalka Barnaamijka, 73% ee suuqleyda B2B ayaa hada isticmaala ama qorsheynaya inay korsadaan ABM sanadka 2017. Waana sabab macquul ah: ABM's ROI wuxuu ka fiicnaan karaa dhamaan maalgashiyada suuq geynta B2B kale.
ABM ma aha fikrad cusub. Xaqiiqdii, qaar baa ku doodaya in ABM uu jiray illaa iyo intii suuqgeyntu jirtay. Waa istiraatiijiyad loola dhaqmo koonto kasta sidii suuq, u oggolaanaya wadajirka guud ee u dhexeeya iibka iyo suuqgeynta.
Maanta, waxaa si fudud uga shaqeysanaya suuqleyda sababtoo ah kororka isticmaalka xogta iskuxiran iyo adkeyn Analytics gudahood suuq geynta. Intaas waxaa sii dheer, xogta ayaa sii kordheysa waqtiga dhabta ah iyo mid la qaadi karo iyada oo loo marayo barnaamijyada Xog-u-Adeegga (DaaS). Aragtiyahani waxay ka caawinayaan suuqleyda inay si fiican u fahmaan oo u aqoonsadaan xisaabaadka ugu faa'iidada badan, taas oo iyaduna u qalabeysa inay mudnaanta siiyaan mudnaanta kheyraadka markii ay ka qayb qaadanayaan xisaabaadkaas iyagoo adeegsanaya maaddada iibka.
ABM xitaa wuxuu udub dhexaad u ahaa istiraatiijiyadeena horumarinta ganacsiga halkan Dun & Bradstreet. Waxaan isticmaalnaa xogta, Analytics iyo la shaqeynta iibka si loo kala hormariyo fursadaha cusub.
Waxay u egtahay mid sahlan oo ku filan, sax? Ma aha sidaas dhakhso badan. In kasta oo ay u muuqato mid fudud dusha sare, ABM wuxuu noqon karaa geeddi-socod adag oo u baahan fulinta caqli-gal ah iyo talo-bixin dhammaan xubnaha kooxdaada.
Halkan waxaa ah shan talaabo oo kaa caawin doona inaad horumariso istiraatiijiyad guuleysan oo ABM ah oo ku saabsan ganacsigaaga.
Tilaabada 1: Samee Kooxo Is-dhexgalka
Kahor cabirka ABM ee Dun & Bradstreet, waxaan diirada saarnay dhaqankeena, istiraatiijiyadda suuqa u aadida iyo fariinta, taas oo ku lug laheyd sameynta dareen cusbooneysiin iyo qiimeyn casriyeysan oo qeyb ka ah casriyadeynta guud ee sumadeena.
Waxaan soo saarnay nidaam fariin oo kusaabsan shaqsiyaadka taas oo kuxiran tan dhibcaha xanuunka ee aan xalinay, taas oo aasaaska u dhigtay istiraatiijiyadeena ABM. Si kasta oo ay u fiicantahay mishiinkaaga dhijitaalka ah, haddii aadan haysan wax lagu kala garto inaad sheegto iyo dhaqan taageeraya, waxaad u badan tahay inaadan ka dhex gudbi doonin qashinka.
Halkaas, waxaan ka soo saarnay "Tiger Teams" oo ka kooban xubno ka socda mid kasta oo ka mid ah howlahayaga suuq-geynta. Kooxahan, oo ay abaabuleen shakhsiyaad, ayaa hadda awood u leh inay ka gudbaan meheradaha dhaqameed, dhiirigelinta fikirka dhammaystiran iyo ficilada nugul si loo hubiyo in mashaariicda lagula tacaalayo awoodda buuxda ee hal-abuuraasheena, Analytics, tikniyoolajiyadda, isgaarsiinta iyo kooxaha dhijitaalka ah si ay khibrad ugu yeeshaan shaqsi kasta.
Tallaabada 2: Aqoonsiga Xisaabaadka Muhiimka ah
Hindisahaagu waa inuusan horay u socon illaa iyo inta iibka iyo suuq-geynta ay ku heshiinayaan shuruudaha xulashada koontada iyo ugu dambeyntiina, ganacsiyadaada bartilmaameedka ah. Waa maxay astaamaha ama astaamaha tilmaamaya xisaab-qiime aad u sarreeya adiga (iyo maamulahaaga)? Wax walba waxay kuxiranyihiin shirkadaada, mudnaantaada, iyo xogta iyo Analytics moodooyinka ayaa muujiyey qiimaha saadaalinta hore.
Waxaan nasiib ku leenahay Dun & Bradstreet inaan isla helno xogta iyo Analytics awoodaha aan u horumarino macaamiisheenna. Waxaan u adeegsannaa jahawareerka iyo tusaalooyinka taxaddarrada si aan noogu sheegno cidda ay u badan tahay in ay kobciso xiriirkooda annaga, cidda aan ka gudbi karno iyo cidda halista ugu jirta in aan dib loo cusbooneysiin.
Moodooyinka qiyaasta dalabka ee ku saleysan qeyb ahaan tusaalaha muuqaalka ayaa noo sheegaya xisaabaadka iyo khadadka meheradda ee fursadda ugu fiican noo leh. Tusaale ahaan, falanqeynteenna ku saabsan macaamiisheena gaarka ah, shirkadaha loo saadaaliyay inay la halgamayaan koritaanka mustaqbalka dhow waxay runtii u badan tahay inay xiiseynayaan iibkeenna iyo xalalka suuqgeynta. Iyo moodellada qiyaasta dalabku waxay naga gudbinayaan wixii ka baxsan waxa koonto ay u badan tahay inay iibsato - waxay naga caawinayaan inaan saadaalinno waxa uu le'eg yahay heshiiska.
Qeybinta, waxaan eegeynaa inaan is waafajinno moodooyinka iibinta iyadoo lagu saleynayo sida aan mar horeba ugu guuleysanay toosnaan, cabir, habdhaqan iibsi iyo u janjeedha inaan wax iibsanno. Adeeg Analytics qiimeeyaan dadaalka ka dambeeya iibka ee horseedaya cusboonaysiinta, taas oo fure u ah diiradda sahaydan kooban ee ku wajahan macaamiisha halista badan iyo qiimaha sare leh. Mudnaanta iibinta iyo suuqgeynta ayaa ogeysiineysa aagagga muhiimka ah ee diiradda loo saarayo dadaallada taga suuqa ee ku saleysan xisaabtanka iyo fariimaha shaqsi ku saleysan.
Tilaabada 3: Farsamo Fariintaada Shaqsiyeed
Iibsashada B2B waxay ku lug leeyihiin saameyn badan iyo iibsadeyaal, taas oo macnaheedu yahay inaad wali tahay inaad horumariso shaqsiyaad badan oo u baahan farriin gaar ah.
Oo waxaan rajeynayaa, hadda maadaama aad aqoonsatay macaamiishaada ugu soo jiidashada badan, waa inaad si fiican u fahamtaa sida loola hadlo. Kaliya maheli doontid inaad bartilmaameedsato caqabadahooda ugu waaweyn, dhibcaha xanuunka iyo yoolalka, laakiin sidoo kale waxaad awoodi doontaa inaad aqoonsato wadiiqooyinka suuq geynta gaarka ah ee ay ugu firfircoon yihiin. Tani waxay kaa caawin doontaa go'aaminta sida aad tahay shakhsiyeeyo fariintaada.
Hadday ahaan lahayd emayl ama warqad toos ah, ama qaab dijitaal ah, waxaad u baahan doontaa inaad horumariso istiraatiijiyad suuq-geyn ah oo suuq-geyn ah oo ku hadasha luuqaddooda kana caawisa inay gaaraan himilooyinkooda. Dhamaadka maalinta, adiga adiga maahan adiga; iyaga ayay ku saabsan tahay. Taasi waa codka kaa caawin doonta albaabada in lagu furo xitaa xisaabaadka ugu adag.
Tilaabada 4: Waa Waqtiga Fulinta
Markaad fulineysid xeeladaha kor ku xusan, waa muhiim inaad ku tiirsanaato KPIs si aad u cabirto saameynta ololahaaga oo aad u sheegto soo-kabashada mustaqbalka. Istaraatiijiyad guuleysata ABM waxay farta ku haysaa garaaca wadnaha afartan cabbir:
Hawlgelinta: Jawiga ganacsi ee ay ku badan tahay qeylada, habka ugu wanaagsan ee loo kaxeyn karo ka qeyb qaadashadu waa iyadoo la shakhsiyeeyo macaamiisha khibradeeda dhijitaalka ah. Waxaa muhiim ah in la fiiriyo cabbiraadaha muhiimka ah sida riixista bogagga degitaanka muhiimka ah, waqtiga lagu qaato goobta iyo is-beddelka macaamiisha si loo arko sida ay uga jawaabaan macaamiishani farriintaada.
Qanacsanaanta Macmiilka: Isbedelada qancinta macaamiisha waxay kuxirantahay kobaca dakhligaaga mustaqbalka. Waad ku cabbiri kartaa adoo adeegsanaya sahanno macaamiil shaqsiyeed, dhibcaha waaweyn ee NetPromoter, barnaamijyada dib u eegista softiweerka ganacsiga iyo xitaa doodaha warbaahinta bulshada.
Dhuumaha: Tani waa mid toos ah, laakiin jawaab celinta talaabo kasta oo dhuumahaaga iibka ah ayaa ku siin doona calaamad muujinaysa heerarka ballanqaadka macaamiishaada. Inta badan ee aad la macaamilayso macaamiishaada, dhuumahaaga ayaa ka sii cayiraya.
Miisaanka: Tani waa tilmaamaha ugu dambeeya ee istiraatiijiyadda ABM ee guuleysta — maxaa yeelay dhamaadka maalinta, maahan wax ku saabsan raadadka la soo saaray, laakiin koontooyinka ayaa guuleystay. Immisa xawaaraha heshiiskaagu wuu kordhay? Celceliskaaga qandaraaska ma koray?
Tilaabada 5aad: Ha iloobin inaad Waxkasta Cabirto
Hindisaha ABM waxay u baahan yihiin waqti si ay u koraan oo ay u bislaadaan. Xusuusnow, waxaad u baahan doontaa xog hodan ah iyo aragtiyo si aad shakhsi uga dhigato isdhexgalkaaga oo aad u xoojiso xiriirka koontadaada. Haddii si khaldan loo ilaaliyo, fursadaha ABM way istaagi karaan. Xagga kale ee xad dhaafka ah, cilaaqaadka koontada ayaa laga yaabaa inay dhaqso u baxaan, iyagoo cabudhinaya koritaanka tallaabooyinka kale ee la xidhiidha ABM ee aad wali u baahan tahay inaad qaaddo.
U wareegista u wareegida istiraatiijiyadda ABM waxay kaa caawin kartaa inaad aqoonsato meelaha ugu weyn ee koritaankaaga iyo ugu dambeyntiina waxaad diiradda saareysaa guuleysiga ganacsi cusub. Laakiin waxay u baahan tahay faham qoto dheer oo ku saabsan xogtaada iyo guud ahaan wadajirka kooxda. Haddii kale, waxaa laga yaabaa inaad weydo fursado muhiim ah oo aad ganacsi cusub uga kaxeyso macaamiishaada aadka u qiimaha badan.
Tags: abmsuuq geynta xisaabtab2bganacsiga ganacsigadnbdun iyo bradstreet
Rishi Dave waa sarkaalka madaxa suuq geynta Dun & Bradstreet. Rishi wuxuu ku biiray Dun & Bradstreet bishii Febraayo 2014 isagoo ka yimid Dell halkaas oo uu ka ahaa agaasimaha fulinta ee suuq geynta dijitaalka. Rishi wuxuu haystaa shahaadooyin injineernimada kiimikada iyo cilmiga dhaqaalaha jaamacadda Stanford iyo MBA suuqgeynta Wharton School, University of Pennsylvania.
Waa kuwan Podcasts-yada ay jecel yihiin Bulshadeennu